Kevin Gameiro Oo Ka Hadlay Waxa Uu Ku Doortay Kooxda Atletico Madrid, Iyadoo Ay Jiraan Dalabyo Uga Imaanayay Barcelona – idalenews.com
Kevin Gameiro ayaa sheegay in uu mar walba doonayay in uu ku biiro Atletico Madrid inkastoo ay xiiso u qabtay kooxda Barcelona ka hor inta uusan ka soo dhaqaaqin naadiga Sevilla.
29-sano jirkaan ayaa muddo dheer lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqo Barca, balse ugu dambeyntii hishiis u saxiixay Atletico sabtidii islamarkaana qalinka ku duugay qandaraas afar sano ah iyadoo Luciano Vietto uu qayb ka ahaa hishiiskan kaaso Sevilla ugu biiray qaab amaah.
Ka dib markii uu u dhaliyay 29 gool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore naadiga seddexda jeer ee isku xigta ku guulaysatay Europa League, Gameiro ayaa indhaha ku haya koobka LaLiga iyo Champions League.
“Waxaan doonayay inaan ku biiro Atletico tan iyo bilowgii, Waan ku kalsoonahay watiga wanaagsan ee ka horeeya. Xidiga reer France ayaa u sheegay saxaafada.
GameiroAyaa sharaxay sababta uu ku doortay kooxda Atletico iyadoo ay jiraan dalabyo uga imaanayay kooxo waaweyn.
“Waxaan halkaan u joogaa inaan ku guuleysto koobab, Champions League iyo LaLiga ayaan jeclahay xilli ciyaareedka soo socda, Tani waa koox weyn ma sugi karo inaan u tartamo horyaalka iyo Champions League xilli ciyaareedkan – Waxaan jeclaan lahaa inaan koob ku guuleysto. ”
naadiga Atletico Madrid ayaa shalay saxiixooda cusub ku soo bandhigtay garoonkeeda Vicente Calderon.